मुहूर्त कति प्रकारका हुन्छन् ? | Mero Jyotish
मुहूर्त कति प्रकारका हुन्छन् ?
वार सातवटा छन् । सात वारमध्ये आइतवार, मंगलवार एवं विहिवार शुभ मानिन्छन् । यी तीनमध्ये पनि विहिवार सवैभन्दा श्रेष्ठ मानिएको छ किनभने यो वारका मालिक वृहस्पतिको दिशा ईशान हो । ईशानमा सबै देवताको वास हुने शास्त्रीय मान्यता छ ।
नक्षत्र २७ वटा छन् । अभीजितलाई २८ औं नक्षत्र मानिन्छ । यीमध्ये कार्तिक महिनामा पर्ने पुष्य नक्षत्रलाई सर्वश्रेष्ठ मानिएको छ । या बाहेक अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, उत्तराषाढा, साउन, धनिष्ठा, शतभिषा, उत्तर भाद्रपद तथा रेवती नक्षत्रलाई शुभ मानिन्छ ।